Sezvo Linux ikozvino inokuratidza iyo distro yaunoshandisa | Kubva kuLinux
Sezvo Linux ikozvino inokuratidza iyo distro yaunoshandisa
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | KubvaLinux
Kushandisa mukana wekuti inogona kutipa kuti tishandure mubrowser yedu iyo Mushandisi Agent, in KubvaLinux iwe unogona kuona izvozvi kugovera urikushandisa…
Kana iwe ukabaya pane logo yekuparadzira, zvese zvakanyorwa zvinoenderana nazvo zvinoratidzwa, saka apo isu patinonyora nezve iwe waunofarira kugovera, iyi ichave iri yekukurumidza nzira yekutsvaga zvinyorwa zvekufarira kwako.
Isu takawedzera iyo migove inonyanya kufarirwa pakati pevashandisi ve GNU / Linux uye isu tinosanganisira Windows:
Ehezve, ivo havazi vese uye zvishoma nezvishoma isu tichawedzera mamwe, akaisirwa iOS y Mac Os. Kana yako distro isingaoneke kana isina kuratidzwa nemazvo, ndapota titumire chiziviso kuburikidza neyedu fomu yekutaurirana.
Tinoda kutenda Jack de vanhu yekutarisira chikamu chemabasa PHP kuzadzisa izvi.
Yakawedzerwa neKZKG ^ Gaara:
Kana izvi zvikaitika kwauri, zvinogona kuve nekuda kwezvikonzero zviviri:
Nekuti iwe unoshandisa distro iyo ASI iri mune yapfuura runyorwa.
Nekuti mubrowser yako hauna iyo UserAgent yakagadzirirwa zvakanaka.
Chero chingave chikonzero, tinokukumbira Bata Kuti ikubatsire uye ikubatsire iwe, nenzira iyi iwe unogona kuona logo yeiyo distro yaunoshandisa, shandisa zvinyorwa zvine chekuita neiyi distro zvakananga, uye isu tichava vanopfuura kufara kukubatsira.
Zvisinei, heano maratidziro anoratidza dzidziso dzekuti ungashandura sei MushandisiAgent webrowser yega yega:
1 Chinja Mushandisi Mumiriri muOpera (kupfuura zvakajairwa)
2 Matipi: Ungachinja sei iyo Chromium Mushandisi Agent?
3 Matipi: Ungachinja sei Mushandisi weFirefox?
Chinja Mushandisi Wemukati mu dhanzi (kupfuura zvakajairwa)
Matipi: Ungachinja sei Mushandisi Agent kubva chromium?
Matipi: Ungachinja sei Mushandisi Agent kubva Firefox?
Isu (elav neni) hatisi programmers kana vagadziri vewebhu, saka chero chikanganiso chauinacho neichi, kusahadzika, mubvunzo, kunyunyuta, dambudziko, zano kana zano ndapota tizivise, isu tichapindura zvese zvaunoda kuziva 🙂
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » KubvaLinux » Sezvo Linux ikozvino inokuratidza iyo distro yaunoshandisa
Izvo zvakadaro hazvindiratidze ruzivo rwekuti ndeipi disto yandinoshandisa 🙂
Nekuti wako Mushandisi Agent muFirefox haina kunyatsogadziriswa. Tarisa pane chako chirevo, icho chinoratidza iyo Firefox icon uye neye penguin, nekuti haina kuona OS yako.
Ini handizive asi ini ndinofanoona kupokana nemumwe wako, pakati pedu, ndinobvuma kuti iwe unoisa iyo Debian icon, asi iye ... chokwadi anokumbira iwe, hongu nekuda kwezera rake iye ane chikwereti kwauri kukuremekedza, hahahahaha.
Hahaha ndinoona kunakidzwa nemakore angu makumi maviri nemana .. Huyai pane asina kuwanda hahaha
Ini ndinowana: «Uri kushandisa ??? kuwana <° Linux ", uye ndiri kushandisa ArchLinux. Chero chipembenene? ​​Kwaziwai shamwari! 🙂
Kwazisai Gregorio uye tinogamuchirwa kuDesdeLinux. Haisi bug chaiyo, kana iwe ukatarisa pane yako chirevo, mushandisi Agent haana kuona kuti ndeipi GNU / Linux kugovera iwe yaunoshandisa. Ndosaka izvozvi tichiisa ???… Kana iwe uchida kuchinja iyo Chrome Yekushandisa Mumiriri, unogona kutungamirirwa na matipi aya. Unofanirwa kuchinjisa zvishoma, nekuti ini ndinofungidzira kuti mu / etc / haugamuchire chromium, asi chrome kana google-chrome ..
WOW, Gespadas pachake 🙂
Kunakidzwa kukuverengera shamwari 😀
Kuti Arch ionekwe (iyo yakatendeseka ndiyo inotaridzika zvakanaka hahahaha) unofanirwa kugadzirisa iyo Chrome UserAgent, ita bvunzo uye uchaona.
Zvimwe chete kwandiri 😉
Chinja iyo Firefox UserAgent woisa izvi:
Kana iwe usingazive maitiro ekugadzirisa izvi, iwe unodaro, ini ndinokupa ruoko 🙂
Kunyangwe ... kuve Arch mushandisi, zvirokwazvo iwe uchazoziva izvi uye zvimwe zvakawanda LOL !!!
Right, murume uyu anogara achindivhenekera nemaonero ake paL haha. Kunyanya, iye anoziva Arch zvakanaka.
Asi kana iwe ukamubatsira nenzira yekunzwira tsitsi, chii chinonzi Misa chakakosha?
Oops! Ini ndakanga ndisati ndaverenga mhinduro futi ... What a head
Hukuru! Kugadziriswa, maita basa kwazvo.
Juas! Elav anogara sei neArch isu tichaona duster! (blog.fromarchlinux.net) xD
HAHA pedza kuverenga zvese, Arch yakagara mazuva maviri chete, akadzokera kuDebian nekunyepedzera kuti zviri nyore kwatiri kuti tiwane repos yeDebian pane yeArch, izvo zvisiri zvechokwadi ... asi huya, ndinoishandisa.Arch neni handina kufa HAHAHA.
Iye zvino tinoratidzira distro yemushandisi neimwe nzira, yakasiyana neiyo inogona kuoneka mumawindo ezvinyorwa zveichi ... pachezvangu, ndinobvuma kuti ndaifarira nzira yekare HAHA
Arch yanga iri imba yemusikana wangu, kwandinogara zvakanaka uye dzimwe nguva ndinopasa basa, Debian ndiyo imba yangu. Ini handikwanise kumirira kusvika 6:00 pm zuva rega rega kuti ISP yangu itendere ini nditore mapakeji. Ini handigone kutarisira kurodha pasi zvinyorwa zvinosvika 200Mb (kana zvikaungana) kubva paInternet. Zviri nyore kwazvo kuti repo yangu yemuno ivandudzwe uye ndiwane zvandinoda kubva ipapo. Ini ndinoda Arch, asi ndinoda Debian. Ini ndakaita kuisirwa muNyanzvi Mode uye zvaive zvakada kufanana neArch, zvese zvakatsengwa
Naaada! Waregererwa! xD
Iwe unozviona izvo nezvinhu nezve repos uye nzvimbo ... Ndeipi mbichana, kutaura zvakaipa uye nekukurumidza.
(Ndinokuregerera nekuti mumoyo mangu mudiki kuchine gomba diki reCrunchbang xD)
Zvakanaka, izvi zvakanaka kwazvo uye zvinonyanya kubatsira.
Zvakanaka, chaizvo imwe yemifananidzo yatinofanira kugadzirisa ndeya Sabayon .. 😀
Zvakanaka, ini ndinoshandisa LMDE uye haina kundiziva. Ini ndinonzwa kufuratirwa, XD
Pindura kune isargone
Chaizvoizvo chinhu chimwe chete chinoitika kwauri saGregorio Espadas. Iyo mhinduro kuitira kuti iwe urege kufuratirwa ari pano.
HAHA nah, hazvina kuita sekureva ichit, hausi kufuratirwa ... chete kuti iwe hauzivikanwe sezvazvinofanira kunge HAHAHAHAHA
Chinja iyo MushandisiAgent uye iwe uchaona iyo inotonhorera iyo icon iri 😉
Ndinoifarira, ndinoda zano. makorokoto. one of my favorite blogs !!!
Thanks 😀 tinozvifarirawo hehe
Gumi netatu akadaro
Zvichava zvinonakidza kuona mune imwe nguva nhamba pamusoro peiyo distros inoshandiswa nevashanyi kublog.
Pindura pagumi nematatu
Zvakanaka, zvinoita sekunge haina kuziva distro yandiri kushandisa (opensuse), asi chinofanira kunge chiri chinhu cheOpera useragent kumisikidzwa.
Heano maitiro ekugadzirisa Opera's UserAgent:
Chinja mushandisi-mumiriri webrowser yangu kuti saiti iratidze logo ye distro yandinoshandisa? Chii chandinofanira kuita zvinotevera? Pinda password yangu yemudzi mubhokisi?
Kunyangwe tichizivana uye nezvose, hazvimborwadzi kukugamuchira iwe kune saiti 😉
Iye zvino ... kana bhurawuza racho RISINA kugadzirirwa nekutadza kuratidza distro (sezvo FF iri muUbuntu semuenzaniso), isu tinofanirwa sei kuziva distro yemuverengi? ...
Hapana, iwe uchandiudza 😉
Ah, uye usayedze, kutsika pano hakuzokuitire chero zvakanaka, isu tajaira ma2 troll ezvinonyanya kunetsa kupfuura iwe LOL !!!
Chaizvoizvo kugamuchirwa kune saiti, saiti iyo isingazombokumbira iwe mudzi password, uye haina kukumanikidza kuti uchinje iyo MushandisiAgent, icho chinhu icho kana iwe uchida kuita, kana iwe usingade, saka iwe don ' t.
Kana kushoropodza kwako kuchivaka, zvinoreva kuti iwe uchatibatsira kunatsa nzira yazvino yekucherechedza yatinoshandisa (PHP + UserAgent), ini handizive, pamwe chimwe chinhu muPython kana chimwe chakadai, asi kana zvisiri iwe uchatibatsira pa zvirinani nemazano kana zvinongedzo ku HowTo, zvakanaka ... zvinoreva here kuti zvishoma zvaunoda kubatsira kana kwete? 😀
Ini ndinodzokorora kugamuchirwa uko KZKG ^ Gaara akakupa:
Dai aive mumwe munhu, ndaizopokana nehungwaru hwake kwechinguva pamberi pekutaura kwakadai, asi ndichiuya kubva kwauri, ndinofunga kuti chinangwa chacho hachisi chekungobuda pachena seTroll.
Haufanire kumisikidza yako Debian kuti ive nzira yaunofarira? Ndezvipi zvakasiyana nezvekugadzirisa Mushandisi-Mumiriri? Zvakare mudiwa, iwe hausungirwe kugadzirisa chero chinhu, saka ndicho chisarudzo chako.
@kzkggara: Handifunge kuti ndine nguva yekutambisa pazvinhu izvi. Hautendi here? 😀
Ah huya, kana chinangwa chako chiri chekungotsika-tsika uye sezvo wakasuruvara iwe wafunga kutisiira komendi, saka hapana chakashata ... isu tajairira trolls (mutsauko ndewokuti isu tinoziva uyu munhu mumunhu LOL), kana ini ndakanganisa uye iwe uchida kutibaya ruoko kunze pamwe nemazano kana chimwe chinhu, uchasiya kumwe kutaura kana chimwe chinhu chakadai.
Tichaona izvo zvakagadzirwa neLOL !!!
Muchokwadi isu tine iwo manhamba, isu tichavaratidza munguva pfupi .. 😀
Ticharatidzawo nyika 😉
Zvinhu zvakawanda zvinogona kuratidzwa, asi pane izvo isu tichafanirwa kuita kudzoreredza zvishoma uye yakawanda chirongwa chirongwa. Iyi ingori yekutanga vhezheni, hongu isu ticharamba tichivandudza iyo.
Vakwegura vane ruzivo rwakawanda nezvose hahahaha
Varombo veavo vadiki vana vasina kukwanisa kuwana zvinonaka zvinoitika zvehupenyu.
Ini zvirinani kunge ndichiita fucking pano pane kukwira kumusoro. Ini ndichave neruzivo nezvinhu, izvo zvinondifadza hongu
Kana ini ndikashandisa Xubuntu nei ndichiwana Ubuntu? Chaizvoizvo zvinogona kutaurwa kuti zvakafanana, asi zvinoita kuti ndide kuziva.
Nekuti wako Mushandisi Agent anoratidza iro Ubuntu zita / logo. Zvakare, kunyangwe iwe uine Xubuntu muMushandisi Agent, iyo logo haizoonekwe nemazvo nekuti hatisati tayiwedzera .. 😀
Fedora yangu inondimaka yakanaka kwazvo, ini ndinoda saiti seyakagadzirirwa uye yakatsaurirwa seyako, zvakare zvakare makorokoto.
Ndatenda, iyi ndiyo nzira yatakawana yekufadza (kana kuyedza) vese vashandisi vedu 🙂
Ndakaona kuti kana ndichishandisa Aurora (kurodha pasi kubva ku tar.gz), ini ndaingova neLinux, asi nekugadzirisa Mushandisi Wemushandi ini ndatova neFedora.
HAHA ndiro dambudziko, kuti kana MushandisiAgent asina kugadzirirwa nemazvo, saka hazviratidze logo yeiyo distro 🙁
Heano maratidziro andinoitwa kwandiri 😉
Y ¬_¬ Jum… iwe watora mukana kuisa post kuti ndikone kuratidza Arch yangu gggrrrr ……. LOL!!!!
Kwazisai uye kunakirwa kuziva kuti wakazvifarira 🙂
Kekupedzisira kutaura, iyo distro haina kuwanikwa, asi nguva pfupi yadarika ndakagadzirisa mushandisi kuti ndione kana ichishanda
Zvakanaka hongu, iyo distro yatokuona iwe. Inoona kuti iwe unoshandisa Ubuntu, asi ... unoshandisa Ubuntu kana Kubuntu?
Kuve iwo mumwe distro nenzvimbo yakasiyana kunovaparadzanisa? Handifunge kuti ndinoita, ndosaka, nekuti zvakafanana
Zvingave zvakanaka kugona kuita kuti iratidze imwe inotonhorera icon zvinoenderana nharaunda, asi kutaura chokwadi handina zano rekuti izvi zvingaitwe sei, dai saiti yaive Python uye isiri PHP panogona kuve nemukana, asi ini handina ziva ... chinhu choga chandinogona kufunga nezvacho chinyorwa chinomhanya munharaunda kune muverengi, asi izvo zvinogona kunge zvichinyanyisa
Ini ndinoshandisa "kubuntu" asi mushandisi mumushandisi ndakangonyora ubuntu.
Nenzira, hatisati tawedzera iyo Kubuntu icon kune ino nyowani mashandiro, ndine hurombo kuti takarasikirwa nezuro, ruregerero rwangu
Ndichaona kana ndichiwedzera izvozvi 😀
Ndizvo zvazvinofanira kuva sekuru
HAHAHA Ini handisi kuzokuudza iwe mutsara wandinoti ichit pese paanotanga kubhowa, nekuti chinhu chekutaura paruzhinji HAHAHAHA
Ini ndinonzwa kusarurwa, pandiri kushandisa Chakra, ndinowana «Uri kushandisa ??? kuti uwane <° Linux ", ichi chirongwa, JAJAJAJAJAJA.
Chakra haioneke kwandiri, ndiri kushandisa rekonq XD
Iko hakuna rutsigiro rweChakra parizvino, imwe distro kwatinofanira kuwedzera rutsigiro lol ... ndinokumbira ruregerero ^ _ ^ U
Ivo vanofanirwa kuisa Kubuntu, ini ndichave nekusingaperi ndinotenda. (^ - ^)
Yakagadzwa kare asi iwe unofanirwa kugadzirisa iyo MushandisiAgent
Chokwadi, Kubuntu yatove pa 😉
Chii chinoitika ndechekuti kana bhurawuza rako (Opera) risingataure saiti iwe yaunoshandisa Kubuntu, isu hatisi vafungidzi, iwe unofanirwa kugadzirisa iyo MushandisiAgent (iri VERY yakapusa) yeOpera kuti uite izvi.
Ichi chinyorwa chichakubatsira iwe: https://blog.desdelinux.net/modifica-user-agent-opera-mas-alla-de-lo-ordinario/
Ah maita basa Gaara !! XD ikozvino kana ichioneka 😀
Iwo dzidziso yakandibatsira zvakanyanya (^ _ ^)
Ini ndanga ndatokanda chipanje ... asi zvinoita sekunge nhasi izuva rangu rerombo ... zvakazoitika !!
Ndiri kushandisa yazvino vhezheni ye chakra kudhara uye haina kuwanikwa. Ndine firefox 11 yakaiswa semabundles. Chero zano?
Iwe unofanirwa kushandura mushandisi mushandisi.!
Iye zvino kana ndikaendesa kumberi kuti igadzirise
Rogger ortega akadaro
Kuedza 1,2,3 🙂
Pindura Rogger Ortega
Kuedza 1,2,3,4 🙂
Pindura kune chronos
Ndine urombo kana ndikauya neizvi izvozvi asi ndezvekuti ini ndinowanawo zvandiri kushandisa ??? mune imwe blog (humanOS) ini ndinowana chimwe chinhu chakafanana saka pano ini ndinoita zvakafanana nepapo: ndinosiya kukosha kwangu kwe «General.UserAgent.Override»
Mozilla / 5.0 (X11; Linux i686; rv: 3.5.16) Gecko / 20100101 Debian Iceweasel / 3.5.16
Kana paine chero munhu angave ane moyo munyoro wekunditaurira kuti ndine dambudziko rakaipa kurigadzirisa, ini ndichahukoshesa uye zvimwe zvakawanda izvozvi izvo zvarongwa kuratidza KubvaLinux sekureva kweMushandisiAgent.
Mozilla / 5.0 (X11; Debian Linux i686; rv: 3.5.16) Gecko / 20100101 Debian Iceweasel / 3.5.16
Mozilla / 5.0 (X11; Debian Linux i686; rv: 3.5.16) Gecko / 20100101 Debian Iceweasel / 3.5.16 sekungondiudza kwawakaita asi ndinoramba ndichiona chikwangwani chidiki «chauri kupfeka ??? kuwana »zvinorwadza…. Ini ndichafanirwa kugara ndisina kuona iyo blog ine Debian mavara
Damn ... zvinongoitika kwandiri kuti chimwe chinhu kubva kune yako Iceweasel vhezheni, kuti wake MushandisiAgent akasiyana kana chimwe chakadai ... O_O ...
Ini ndichaedza kushandisa imwe browser (Chromium) kuti ndione kana iri dambudziko rebrowser asi ini handivimbise chero chinhu hehe
Ikozvino Chromium inofanira kubuda kana ndazviita nemazvo… ..
Zvakanaka, handikwanisi kuitora, ndiri kushandisa Arch 64 bits neChromium. Mutsetse upi wandinofanira kuisa mune inoitisa, ini ndanga ndatotevera matanho uye hapana.
Iwe unoisa Chromium pachinzvimbo che Chrome uye iwe uchiramba uchiwana iyo Chromium icon? Kana zvirizvo, saka iri bhaggi mune iyo plugin inozivikanwa nebrowser. Ndokumbirawo, kana zvirizvo, ndizivisei, kugadzirisa iyo plugin uye kumhan'ara iyo bug (uye kupa mhinduro) kune yepamutemo plugin yekugadzira 😉
Zvakanaka mushure mekuita imwe tsvagiridzo, Archlinux inowanikwa mune iyo distro yandiri kushandisa, iyo yandisingazive ndeye browser, inova chromium.
Ini ndatozvigadzirisa uye zvinoita kunge zvinoshanda. Iri jira rine Arch.Iwe unofanirwa kugadzirisa zvese zvishoma nezvishoma, asi zvadaro zvinoshanda nemazvo.
Kana zvese zvinhu zvangogadzirirwa, uye uchinyatso kutarira kuvandudzwa ... hauzove nematambudziko 😀
Mune ino runyorwa Trisquel wangu naLubuntu vangu vasipo ... ndinoreva, kuva neiyo logo yemwanakomana wecanonical kunondirwadza
Kana iwe ukaisa muMushandisiAgent uyo waunoshandisa Trisquel ini ndinofunga mureza uchaonekwa, mune zvakataurwa ini handina chokwadi kwazvo ... handicharangarira 🙂
Kana iwe ukanditumira iyo .SVG ye logo yeaya madistros, ini ndinoita marongero uye isu tinopa iko kutsigira 😀
ndiregererei ndinoramba ndichiyedza useragent
Kuedza Mushandisi Agent
Luis Hernando Sánchez akadaro
Mageia achiri kushayikwa.
Pindura Luis Hernando Sanchez
Pane chero munhu anoziva kugadzirisa useragent muRekonq?
regai tione kana zvichishanda
arch logo haina kubuda
Zvakanakisa kwazvo peji ino
Ngatione kuti inoratidzika sei
Bug inogadzirisa muLinux Mint 12
Kutsiva iyo Xfce pani neTint2